संघीय यात्राका तीन चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
चुनौती धेरै छन् । तर निराकरणका बाटा पनि छन् । ७–प्रदेशीय संघीय संरचनामा रहेको स्वामित्वको संकटमोचनको पहिलो कदमबारे संविधानको धारा २९५ (१) बोल्छ, ‘प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।’ अन्य विवादास्पद विषयमा पनि संविधान संशोधनका लागि ३ वर्षयता धेरै लिखित राजनीतिक सहमति भएका छन् । हेक्का राख्नुपर्ने विषय छ, संविधानको धारा २७४ ले सीमांकनको सवालमा संविधान संशोधन लगभग असम्भवजस्तै बनाएको छ । एक दोस्रोसँग यसरी बाझिएको प्रावधानको समाधान खोज्न आवश्यक छ । अन्य समस्याको निराकरण डि–ब्युरोक्राटाइजसन र दलको आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्रीकरणसँंग जोडिएका छन् । तर नियत, नियति र परिस्थिति आसलाग्दो र उत्साहजनक छैन । प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:४७
बाबु–आमा अलग–अलग बसेर यो कसरी सम्भव होला ? हाम्रो समाजमा यसरी अलग भएर रहन पुरुषलाई जति सहज महिलालाई हुँदैन । अनेक सामाजिक लाञ्छना सहेर एकल रही समाजमा घुलमिल हुन जति कठिन हुन्छ, त्यति नै कठिन बिना बाबुको सन्तानलाई हुर्काउनुपर्छ । सन्तानका बाबुआमा पतिपत्नी हुनै नसकेबाट सन्तानको कानुनी अधिकार र दायित्व कायम राख्न (दफा ११८) हाम्रोजस्तो समाजमा कसरी सम्भव होला ? यसरी जन्मिएका सन्तानले स्वस्थ मानसिकतासाथ हुर्कन र सामाजिक प्रतिष्ठा पाउन सक्लान् ?
महिलालाई बिना बाबुको सन्तान जन्माउन अर्थात् विवाह नगरिकनै सन्तान जन्माउन पाउने अधिकारको व्यवस्था प्रजनन हक सम्बन्धी कानुनबाट गर्न लागिएको छ । तर संसद्मा पेस भएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको प्रावधान हुबहु पारित भए नागरिकता दिने बेला बाबुको नाम खोजिनेछ । बाबु पत्ता नलागे वा नाम उल्लेख गर्न नचाहे आमाले ‘बाबुको ठेगाना नभएको’ भनेर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यसबाट त्यस्ता सन्तानलाई राज्यले ‘अवैध’ बनाउन खोजेको मात्र नभई महिलाको अस्मितामाथि सार्वजनिक प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने मनसाय राखेको प्रस्ट हुन्छ ।